1 Samuel 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
11 Ɛbae sɛ Ammonni+ Nahas bae bɛbɔɔ Yebes+ a ɛwɔ Gilead no so nsra. Ɛnna Yebes mmarima nyinaa ka kyerɛɛ Nahas sɛ: “Wo ne yɛn nyɛ apam na yɛnsom wo.”+ 2 Na Ammonni Nahas ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nhyehyɛe yi na megyina so ne mo ayɛ apam, ɛne sɛ, metutu+ mo mu biara aniwa nifa na mede ayɛ ahohora ato Israel nyinaa so.”+ 3 Ɛnna Yebes mpanyimfo nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Ma yɛn nnanson, na yɛbɛsoma abɔfo akɔ Israel nsase nyinaa so, na sɛ yɛannya ogyefo+ biara a, ɛnde yebefi adi aba wo nkyɛn.” 4 Na abɔfo no kɔɔ Saul kurow Gibea+ mu kɔkaa asɛm no kurow no mufo asom, na kurow no mufo nyinaa momaa wɔn nne so sui.+ 5 Ná Saul fi wuram reba a ɔreka mmoa, na Saul bisae sɛ: “Dɛn na ayɛ kurow yi a wɔresu yi?” Ɛnna wɔkaa nsɛm a Yebes mmarima aka no kyerɛɛ no. 6 Bere a Saul tee asɛm no, Onyankopɔn honhom+ sii no so, na ne bo fuwii kɛse.+ 7 Enti ɔfaa anantwi abien, na otwitwaa wɔn mu asinasian de hyɛɛ abɔfo no nsa sɛ wɔmfa nkɔ Israel nsase nyinaa so,+ na ɔkae sɛ: “Obiara a ɔwɔ yɛn mu a ɔremfi adi mmedi Saul ne Samuel akyi no, sɛɛ na wɔde bɛyɛ n’anantwi!”+ Na Yehowa ho hu+ tɔɔ ɔman no so, na wofii adi sɛ onipa biako.+ 8 Enti ɔkan+ wɔn wɔ Besek; ná Israelfo ano si mpem ahasa, na Yuda mmarima ano si mpem aduasa. 9 Afei wɔka kyerɛɛ abɔfo a wɔbae no sɛ: “Nea monkɔka nkyerɛ mmarima a wɔwɔ Yebes a ɛwɔ Gilead ni, ‘Ɔkyena owigyinae, mubenya ogye.’”+ Ɛnna abɔfo no bɛka kyerɛɛ Yebes mmarima, na wodii ahurusi. 10 Ɛno nti Yebes mmarima no kɔka kyerɛɛ Ammonfo sɛ: “Ɔkyena yebefi adi aba mo nkyɛn, na nea ɛteɛ mo ani so biara, momfa nyɛ yɛn.”+ 11 Ade kyee no, Saul+ kyekyɛɛ nkurɔfo no mu abiɛsa,+ na wɔbɔ wuraa Ammonfo+ nsra mu ahemadakye+ kokunkum wɔn kosii owigyinae. Wɔn a wɔkae nso, wɔbɔɔ wɔn hwetee ma wɔn mu baanu mpo anka wɔ faako.+ 12 Ɛnna ɔman no keka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Henanom na wose, ‘Saul na ɔbɛyɛ yɛn so hene anaa?’ no.+ Momfa wɔn mmra na yenkunkum wɔn.”+ 13 Nanso Saul kae sɛ: “Munnkum obiara saa da yi,+ efisɛ ɛnnɛ, Yehowa agye nkwa wɔ Israel.”+ 14 Akyiri yi, Samuel ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Mommra mma yɛnkɔ Gilgal+ na yɛnyɛ ahenni no foforo+ wɔ hɔ.” 15 Enti ɔman no nyinaa kɔɔ Gilgal, na wosii Saul hene Yehowa anim wɔ Gilgal. Afei wɔbɔɔ asomdwoe afɔre Yehowa anim,+ na Saul ne Israel mmarima nyinaa dii ahurusi kɛse+ wɔ hɔ.